Tsvangirai seriously ill - DailyNews Live
Tsvangirai seriously ill
Fungi Kwaramba • 27 October 2017 8:49AM • 5 comments
HARARE - Ailing MDC leader Morgan Tsvangirai was on Wednesday airlifted to South Africa for urgent medical attention as his failing health begins to cause panic in his 18-year-old opposition party.
The Daily News can report that Tsvangirai boarded the South African Airways flight on Wednesday afternoon, in the company of his wife, Elizabeth.
We sympathize with the sick & wish them a speedy recovery & a health return to the fold
addmore gudo - 27 October 2017
kukwira ndege kurwara reporter kutaura kwausina kuswera
Kuna vose vano shuvira zvakanaka kunyika yedu. Ngatisanganeyi papeji rinotevera www dot facebook dot com backslash Todini-Senzeni-1248391371973588 kuitira paye patinenge tabirwa mavhoti edu.
Mufana Wedzungu neZvivindi - 27 October 2017
get well soon Mr Tsvangirai. may the Lord remember you at this difficult time
kelly - 27 October 2017
i wish you a speedy recovery save patimire pakaipa
John Shazhu - 1 November 2017